Sberbank, kadhi yokutsiva: chinokonzera, nzira. How kuwedzera Sberbank kadhi
Nhasi vachaona sei akunoita uye anoshanda vatengi Sberbank. Card yokutsiva uye kuwedzerwa rwezvemabhengi epurasitiki - ndizvo chinokunakidza vanhu zvikuru. Havasi vose anonzwisisa zvakadini kubhangi kadhi iwe se uye kana vachifanira kuzodzosera rinopfungaira kana waregerera. Nzwisisa izvi zvose hakusi nyore kudaro. Chinhu chikuru - kuziva zvimwe nuances acho. Chii kutsvaka pakutanga? Vanofanira kuziva mugari wose ane pamahombekombe Sberbank kuti epurasitiki?
Makadhi dzakasiyana - mumwe musimboti
The ndechokuti chaunotanga kuteerera vatengi - ndechokuti urongwa zvemari iri mubasa kugadzirwa pakubhadhara anoverengeka rwezvemabhengi epurasitiki. kugadzira ré-kusunungurwa nzira imwe nyaya achava zvakafanana. Asi pano mashoko kushandiswa akasiyana. Saka zvinokosha kuziva izvo makadhi kupa Sberbank.
Panguva iyoyo, zvinotevera mhando epurasitiki:
Kakawanda, vanhu vanoshanda debit makadhi uye "makadhi". Muhoro kadhi kakawanda yatsiviwa mushandirwi. Naizvozvo, kuti mugari havafaniri kufunga pamusoro kwacho.
bhangi neimwe ine ayo mapurasitiki "upenyu anotarisirwa". Kururama kwemashoko mumari Bank of kadhi zvichisiyana 1 gore 5 years. Kazhinji, rakajairika makadhi zvinokosha kwemwedzi 36. Shure iyi mapurasitiki inofanira kushandurwa. Kuti mashoko sei kuita izvi huchakurukurwa.
Shoko rokuti "upenyu" imwe kadhi inoratidzwa nechemberi kurutivi mapurasitiki. Panofanira kuva gore uye mwedzi kuregedza kushanda. anobatsira pfungwa vagari panyaya chokuita yokutsiva, kuvandudzwa uye apiwa nyaya neSvondo.
In yose, pane embodiments inoverengeka pfungwa iyoyo. More zvakananga, zvikonzero unofanira kuuya yakakodzera kushandiswa kuti mari Bank. Replacement Makadhi akaita maererano nechirongwa. Ichi ndicho chikonzero wokutanga.
Vakaronga ré-kusunungurwa - muitiro kuti kunowanzoitwa kunyange pasina kutora chikamu ari muridzi. Citizen akaita mapurasitiki itsva inogona anhonga panguva nebazi Sberbank, izvo kuumbwa kadhi chepuraimari.
Kana vakaronga kuchinja harudikanwi, zvinokosha kuti ndizivise tsika mari hapana paya pane mazuva 45 asati expiry mapurasitiki. Ipapo chichava zvinobvira kutsiva kadhi pachavo, kana zvichidikanwa.
Muchiitiko Next - ezvinhu umo mumari Bank kadhi chiito yapera. Pane kudaro chinhu somunhu unscheduled apiwa kusunungurwa. Izvi zvakajairika. Kutaura zvazviri, ndiye yakazvimirira mashoko mugari kugadzirwa itsva kadhi akasungirirwa yekare nhoroondo.
Kana Ndinogona kushandisa kuti mari Bank nokuda kwechikonzero ichi? Replacement Makadhi akaita kana:
Mugari pasina chero nguva akasarudza reissue kubhengi kadhi. Tsanangura zvikonzero hazvina zvakakodzera.
Nokurasikirwa Bank epurasitiki. Zvadaro kunodiwa ezvidzidzo pfungwa pfupi zvichibvira nguva.
Kana zvakabiwa kubhengi kadhi. Pre-vanofanira akakiya mapurasitiki. Saizvozvowo, sokune kwokurasikirwa.
Pakave kuchinja kwako zvemunhu (Name, Last Name mugari). Somuenzaniso, kana vakaroorana kana kurambana.
The kadhi akanga "kudyiwa" by ATM. Zvakajairika nyaya. Kunyanya kana mumwe mugari vakakanganwa PIN remitemo kubva kumahombekombe epurasitiki.
Card ichivharira. It kunoitika sezvo chokuzvidira ichivharira uye vanomanikidzwa.
Zviri mumamiriro ezvinhu akadaro kunodiwa kufunga sei kuchinja mepu iri mari Bank. Chaizvoizvo, hapana chakaoma nezvazvo.
Asi usati kugadzirira kubhangi mapurasitiki, unofanira kufunga kuti nzira paanoitwa chepuraimari. The ndechokuti, zvichienderana norudzi kadhi achapiwa rimwe kana rimwe mazita magwaro. Kana debit mapurasitiki vangada zvinotevera bepa:
Vanofanira kuuya chero bazi mari Bank uye kunyora chikumbiro fomu kuti ape debit makadhi. Shure kwamazuva 10-14 kunhonga mapurasitiki. Zvino zviri pachena, sezvo anogona kuva nyaya huru Sberbank kadhi. Uyewo, vatengi anokodzera kuwana pachake pfungwa kuupenyu nokushandiswa kwe "kadhi musha pakusununguka." Izvi mapurasitiki kuti Indaneti achishandisa YEPAMUTEMO YEPAINDANETI tsika zvemari.
Initial magadzirirwo "kadhi"
Asi kana tiri kutaura sei kuti ashongedze kadhi nemari Bank, inova kadhi, marapirwo kwacho tsika nemari kuchinja zvishoma. Nyaya iripo ndeyokuti pfungwa yepakutanga inogona zvakauya:
basa "Sberbank Online";
Sberbank yepamutemo yepaIndaneti;
kushanyirwa kuti kuhofisi kambani zvemari.
Asi zviri pakuraramisa zvimwe pamazita kuchengetedzeka, zvimwe pane chii chaidiwa kugadzirwa ane debit kadhi. Nokuti kunyoresa kadhi rechikwereti muna mumari Bank ukakumbirwa kuti:
Magwaro, uchapupu mari;
kushanda zvinyorwa mugari;
bepa zvinoratidza kwevakaroorana hweHIV.
Uye kana uchida kushandisa nokuti kunenge kusunungurwa mari Bank? Kutsiva kadhi mhando zvinoda zvakafanana kuchengetedzeka sokune chezvinhu kugadzirwa epurasitiki. Uye inofanira kukurukurwa.
Kana mugari asina akaratidzawo kusada yake kudarika ari otomatiki kusunungurwa pamahombekombe mapurasitiki, hapana chikonzero chose kuti kunetseka sei kuwedzera Sberbank kadhi. Zvave kuti chinoitwa kwaita. All kuti richaramba mugari - iri kuuya uye tora epurasitiki yenyu.
Zvakakosha kuziva kuti chisarudzo ichi hachisi zvose zviri nyore. Handiti, zvakakodzera kutora kubhangi kadhi zvakananga mumba, izvo pakutanga ndarisaina epurasitiki. Kana uchida kuwana nayo kumwewo, mazuva 45 asati expiry ari mugari anofanira kuudza azvinyore.
Usati tichiita apiwa nyaya kubhengi makadhi, unoda adzikatidza kare iripo epurasitiki. Pasina mudzimu haangavi ashandurire pfungwa chiito. Zvaunofanira kuita? Zivisa mari! Replacement makadhi akakiya yekare mapurasitiki anogona kuitika panguva imwe chete.
Chero zvazvingava, kugumisa kare rakapa makadhi kunogona:
nokushandisa Sberbank pachake;
kuburikidza "Mobile Banking";
kushandisa runhare Hotline;
Kana munhu nyaya iri nyore. A mugari anouya chero bazi mari Bank, ipapo akanyora mashoko pamusoro zvechizarira. Zviri zvokuti ID makadhi. Kana paine - kondirakiti nokuda kwezvifananidzo zvaAtemisi mapurasitiki.
chiito Personal anogona akakiya kadhi 3-peta zvisiri akapinda PIN. Muchiitiko chino, zvaitika nokukiya kunoitika. Kana mugari akashanda pamwe ATM, mapurasitiki vachange "kudyiwa".
Zvokufunga nezvazvo sei kuchinja map mumari Bank mu rimwe guta kana hofisi pamberi kufira kuti epurasitiki matanho, unogona kudana nhamba 8800555 55 50. Uyezve, opareta paakaudzwa zvavo nevavariro. Muridzi anodana nameplate Data uye shoko rakavanzika. Pakangotanga opareta yave kuzivikanwa kuti hurukuro chaiyo muridzi, ichabereka zvibereko mapurasitiki zvechizarira.
SMS-chikumbiro nomukombiyuta "Mobile rwezvemabhengi" - vakawanda kuitika. Unofanira kutumira SMS kuti nhamba 900 youduku "kiya okupedzisira 4 digits ari kadhi, kuburikidza pakakoromoka -. Chikonzero ichivharira" Zvikonzero angava sezvinotevera:
0 - kurasikirwa kadhi;
1 - kuba;
2 - "mumigwagwa yakawandisa motokari" ATM;
3 - zvimwe zvikonzero.
Nzira dzekufambisa ré-kusunungurwa
Ngatitii ratokiyiwa ne epurasitiki bhengi Sberbank. Tsiva kadhi kana reissue pamwe kuzvironga akavhiyiwa kunogona kuitwa nenzira dzinotevera:
pachako nyaya kubazi, iyo yakaitwa anonyanya chikweshe;
shanyira chero bazi mari Bank;
kuburikidza "kadhi musha pakukurukura" Website uchishandisa mabasa.
The mugari pachake ane kodzero yekusarudza mumwe kana mumwe nzira chiito. Zvinokurudzirwa kuti kushanyira pachedu chero bazi mari Bank. Izvo zvichaita zvakakunakira mimwe apiwa nyaya kubhengi epurasitiki.
Chii nzira chokubata mumari Bank? Kutsiva kadhi zvichava, sezvambotaurwa, pahwaro kushanda pedyo mugari. Kuzvishandisa zvakakwana kuona mhando debit kadhi tichitarisa basa. Next, enda kubhengi ane kadhi uye nyora chikumbiro nokuda reissue kana kuvandudzwa munhu rakakiyiwa epurasitiki. Hapana chakaoma kana chinokosha nezvazvo.
Zvinokosha kuteerera chokwadi kuti mudonzvo akabvunza kana kwambova mugari kubhengi Sberbank kadhi. Kana mhinduro iri hongu, zvino munhu achaparadzwa akabvunza kana achida kuisa mapurasitiki kuti huripo nhoroondo.
How kushandisa apiwa kusunungurwa, kana totaura pakushandisa Internet michina? On pamutemo Website of mari Bank chinodikanwa kusarudza mashandiro "Reissue Card". Dzimwe nguva rinonzi "kadhi musha pakusununguka." Pamwezve mhando uye mwero muenzaniso anotumwa. Rinoti:
zita rizere yemberi muridzi;
Pasipoti Data of yauri kushanyira;
ruzivo pamusoro kunyoresa sangano;
hofisi, apo ndinoda kunhonga mapurasitiki.
Saizvozvowo, makadhi matsva achange Sberbank apo mugari vachakuudza. Zvakakwana vauye panguva yakatarwa kuti dhipatimendi pamwe ID, uye ipapo kunhonga kubhengi kadhi.
Kana makadhi , zvose zvinoitika saizvozvo. mugari chete anofanira kuuya navo magwaro anodiwa kuti pave chikuru "echikwereti".
Zvakaratidza kuti izwi iri mari Bank of kadhi haana kukosha kudaro. Pashure pezvose, mumwe mugari chero nguva anokwanisa akakiya mapurasitiki uye reissue nayo. Hapana akaoma kwacho.
Panguva iyoyo, kubhangi epurasitiki debit kuti mhando Indaneti hazvibviri. Saka, chiito uchava pachake chete. Asi makadhi chikwereti inogona rakapa kuburikidza mukuru Website uye "Sberbank Online". Zvino zviri pachena sei kuwedzera mari kadhi kana kiya nayo.
Chii rwezvemabhengi ezvinhu ari Russian Federation
Unoda chikwereti kana chipo? "Russian Standard": rondedzero pamahombekombe wacho mabasa
Safe dhipoziti mabhokisi. Rental dhipoziti bhokisi
Non-Nokutendeka kuchengetedzeka - a ... Types vasiri zvakarurama kuchengetedzeka
Popular kero ATMs ( "Alfa-Bank", Moscow). Currency ATM "Alfa-Bank" muMoscow. Zviteshi vane mari mutambo
Sei top yako wakatsiga pamwe Sberbank kadhi, kana kana nhoroondo ichibuda mari ...
Sacred uswa: rinoporesa ehupfumi kuti somuzivi
Areka i ... Nhau yechokwadi pamusoro paNoa, kana imwe nhau yemadzitateguru?
Actress Valentin Serov: Biography, mhuri, okugadzira zvinhu
Alisa Krylova: fashoni womuenzaniso, muzvinabhizimisi uye Yokufarirwa Ambassador
Hebrew umambo uye vatongi vayo. Guta guru echiHebheru umambo
Zvakavanzwa Oriental nerunako. How kugadzirira Ginger tii uremu?
Cytomegalovirus hweHIV vari mwana: zvinokonzera, dziviriro uye kurapwa
Chipa Datenroku muMoscow: mazita ne mapikicha uye vatengi wongororo. Where kugara pakati Moscow mune kokupata Datenroku?
Bazi iri vakasiyana mhando
Muto "Southern": yokubika, hwokutiparadza uye GOST
Peristaltic Pombi: mhando uye tsananguro. How kuti peristaltic Pombi nemaoko ako?